नेपालमा कर के केमा छूट गर्ने व्यवस्था छ ? | गृहपृष्ठ
Home प्रडक्ट नेपालमा कर के केमा छूट गर्ने व्यवस्था छ ?
नेपालमा कर के केमा छूट गर्ने व्यवस्था छ ?
आधारभूत कृषि उत्पादन र कृषि सामग्रीहरू, आधारभूत आवश्यकताका तोकिएका वस्तुहरू जीवजन्तु तथा सोको उपज, शिक्षा, किताब, अखबार, सांस्कृतिक, कलात्मक र कालिगढी सेवा, यात्रुवाहक यातायात तथा ढुवानी सेवा, मानव औषधिमा कर छूट हुन्छ । खासगरी नेपालमा उत्पादन नहुने मेशिनरी औजार, तिनका पार्टपुर्जा, यन्त्र उपकरण, पेनस्टक पाइप वा सो बनाउन प्रयोग हुने फलामे पातामा पनि कर छूट रहेको छ ।
कुनै पनि कर प्रणालीमा कुनै पनि देशको आर्थिक विकास र सामाजिक विकासका लागि करदातालाई अभिप्रेरित गर्ने उद्देश्यले केही कर छूटहरू दिएको हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रले अन्तरराष्ट्रिय द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धिसम्बन्धी नियमअनुसार कर छूटको सुविधा दिएको हुन्छ ।
उक्त नियमअनुसार सबैभन्दा पहिले त नेपाल सरकारले अरू देशहरूसँग गरेका सन्धिसँगै र युनाइटेड नेशनसँग गरेको सम्झौताको आधारबाट यदि कुनै विदेशी व्यक्ति नेपालमा आएर कुनै दूतावास वा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कुनै कार्यालयमा काम गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कर छूटको व्यवस्था हुन्छ ।
सोसियल सेक्युरिटी पेमेण्ट (वृद्धभत्ता आदि), जुन नेपाल सरकारबाट तिरिएको छ, त्यसमा पनि कर छूटको व्यवस्था हुन्छ । विदेशमा सेना, पहरीमा काम गरेर सेवा निवृत्त भई नेपालमा आएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सनमा पनि कर छूट हुन्छ । नेपाल सरकारले दिने पेन्सनमा भने कर लाग्छ । नेपाली कर्मचारीहरू, जो दूतावास, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा काम गर्छन्, उनीहरूले पाउने रकममा कर लाग्छ तर विदेशमा काम गरेर यहाँ पेन्सन भुक्तानी लिएमा कर छूट दिएको हुन्छ ।
त्यस्तै, व्यवसायहरूमा पनि कर छूटको व्यवस्था गरिएको छ । देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कर लाग्दैन । नेपालमा जति पनि कृषिसँग जोडिएका क्षेत्रबाट आय हुन्छ, त्यस्तो आयमा कुनै किसिमको कर लाग्दैन । जस्तै– कृषि, खाद्यान्न, पशुपक्षीको खरीदविक्री जस्ता कारोबारबाट भएको आयमा कर लाग्दैन ।
शून्य दरको सुविधा
नेपालबाहिर निर्यात हुने वस्तुहरू एवम् आपूर्ति हुने सेवा
कूटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्तिले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाहरू
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन भएको उद्योगलाई विक्री गरिने कच्चापदार्थ तथा उत्पादित सामान
स्वदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादित सौर्य ऊर्जा उत्पादन गर्ने संयन्त्र र ब्याट्री
स्वदेशी उद्योगहरूबाट उत्पादित जलविद्युत् आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने मेशिनरी औजार, तिनका पार्टपुर्जा, यन्त्र उपकरण, पेनस्टक पाइप वा सो बनाउन प्रयोग हुने फलामे पाता
स्वीकृत निर्यात व्यापार गृहमार्फत घरेलु तथा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका मूर्तिकला, चित्रकला, वास्तुकला एवम् हस्तकलाका सामान विदेश निकासी गरेमा
एक्लो व्यक्तिको हकमा वार्षिक ३ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आय हुनेको हकमा १ प्रतिशत कर लाग्छ ।
बिहे गरिसकेको व्यक्तिको हकमा वार्षिक ४ लाख आम्दानी भएमा त्यसरी बढी हुने रकममा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्छ ।
एक्लो व्यक्तिको आम्दानी वार्षिक ३ लाख ५० हजारभन्दा बढी भएमा र बिहे भइसकेकाको ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएमा १५ देखि ४० प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । सीमाभन्दा १ लाख रुपैयाँसम्म बढी भएमा १५ प्रतिशत, त्यसपछिको २५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र २५ लाखभन्दा बढी भएमा ४० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
छैटौं कर दिवस
काठमाडौं । २० वर्षपहिले नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै सरकारले मङ्सिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउने गरेको छ । भ्याट लागू भएको शुरुआती वर्षहरूमा पान दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको कर दिवस २०६९ कात्तिक २ गतेको सरकारी निर्णयपछि राष्ट्रिय कर दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
यो वर्ष सरकारले ‘हाम्रो पौरख हाम्रो कर : राष्ट्र निर्माणको दिगो भर’ मूल नाराका साथ छैैटौं राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन लागेको हो ।
कर दिवसको दिन पारेर आन्तरिक राजस्व विभागले बिजक प्रणालीमा सुधार ल्याउने कम्प्युटर अनुगमन प्रणाली शुभारम्भ गर्ने भएको छ । विभागले करदातालाई सुविधा होस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताएको छ ।